Indlela ukupheka isoso kusuka utamatisi? zokupheka
A ezihlukahlukene ketchups kanye utamatisi sauce hit ngaso leso sikhathi ngenxa cishe wonke umuntu. Lapha, yingxenye kuphela lezo izinhlobo ukuthi zingatholakala emashalofini yisiphi isitolo, ukuhlukanisa ewusizo njalo. Kungcono kakhulu ukukhetha yakho iresiphi isoso kusuka utamatisi, upheke ekhaya. Khona-ke ukhathazeke impilo imikhaya yethu akudingeki. Awazi indlela yokwenza isoso kusuka utamatisi? Zama izindlela kungase kutholakale!
Classic utamatisi sauce
Uzodinga ngamakhilogremu amathathu utamatisi, eziyikhulu namashumi ayisihlanu amagremu ushukela, amagremu amabili nanhlanu kasawoti, ayisishiyagalombili amagremu of uviniga, clove, peppercorns, garlic, usinamoni, paprika. Ngaphambi kokwenza isoso kusuka utamatisi, khetha bese abilayo ingilazi izimbiza yokugcina umkhiqizo osuphelile. Fake usike utamatisi bese uwafaka epanini, phezu medium ukushisa Uvarov Umqulu wesithathu, ufafaze e ushukela bese ukuphela imizuzu eyishumi. Engeza usawoti bese ukuphela imizuzu emithathu, bese Sula yonke ngokusebenzisa colander noma ngesihlungo. Nalapha ubilise, uthele uviniga futhi uthele ku a izimbiza pre-ezilungiselelwe. Roll up. Excellent isoso okuzenzela elinomlando omude obuhlungu utamatisi ukunambitheka lokugcina!
Ukuze silungiselele lokhu sauce kuthatha Kilos eziyisithupha nengxenye utamatisi, a clove ambalwa ugarlic, amagremu angamakhulu amathathu onion, amane namashumi ayisihlanu amagremu ushukela, eziyikhulu amagremu kasawoti, usinamoni, clove, lwesinaphi, peppercorns, Amane namamililitha ka 70% uviniga. Ngaphambi ukupheka isoso kusuka utamatisi, badinga problanshirovat emanzini, cwilisa abilayo emanzini abanda njengeqhwa abanga izinkinga, ukususa ikhasi kanye imbewu. Ngemva kwalokho, utamatisi kufanele asikwe futhi usike blender. Uma kungaqali, sebenzisa grinder inyama. Crush nesweli, onion, izinongo kanye hlanganise utamatisi, beka on ipuleti. Thela ingxenye yesithathu ushukela abilisiwe phansi ukunciphisa ivolumu ngesigamu. Govuza asele ushukela, usawoti bese uthele uviniga endaweni ngekota yehora. Ubilise imizuzu eyishumi uthele izimbiza ahlanzekile. Umkhiqizo kungenziwa usongwa futhi sigcine ebusika.
Abanye abantu bakhetha zonke ezinye okuthandwa okubabayo. Indlela ukupheka isoso kusuka utamatisi behlakaniphile? Thatha ezintathu amakhilogremu of utamatisi, isigamu ikhilo onion, ezine amagremu ushukela, a spoonfuls ambalwa lwesinaphi, namamililitha angamakhulu amane 9% uviniga, amahlamvu bay, emnyama, zokhuni amajikijolo pair usawoti. Crush utamatisi no-anyanisi rasparte emandleni isilinganiso nokushisa, embozwe Sula ngokusebenzisa ngesihlungo. Shisisa uviniga, engeza izinongo kanye thumba, cool u hlanganise puree utamatisi. Uvarov inhlanganisela eyodwa, ushukela, usawoti kanye lwesinaphi, bese ubilise imizuzu eyishumi. isoso Zezıhlabane ukubola ku namakani oyi-inzalo futhi usongwa.
Indlela ukupheka isoso kusuka utamatisi, uma ungafuni ukungeza izingxenye ngezigaba? Thatha ezimbili Kilos utamatisi ezivuthiwe, ikhilogremu lawo elilodwa pepper kanye esilinganayo anyanisi, inkomishi ushukela, usawoti, pepper, lwesinaphi elomile, kanti amagremu ayikhulu namashumi amabili namafutha omnqumo. Grind zonke izithako blender, engeza izinongo bese upheka isoso on ukushisa low cishe amahora amabili. Umkhiqizo okuphelele uthele izimbiza kuhlanzekile futhi Roll up.
Ilayisi nge inyama - insindiso uwayehlalise!
Juicy ushizi kusukela inhlama. Indlela ka ehla esiphundu
Uhlobise nge ithanga: zokupheka izwe
Indlela ukupheka Unogwaja esihlwabusayo
Ungadliwa ekhaya ukupheka: indlela ukupheka amakhowe izinqolobane
-hemoglobin okuphansi - uphawu isifo esiyingozi?
Indlela ukukhetha heater ngoba umshini wokuwasha? Imigomo esikhundleni
Ukuqala ukunyakaza Stakhanovite nokwenziwa ngcono amazinga ukukhiqizwa eU.SSR
Umuthi 'Britomar ": Yokusetshenziswa
Yini okufanele ibe umbandela wezocansi? Izinhlobo zemibundu
Lokho kungabangela ubuhlungu esifubeni?
Yikuphi okungcono ukuthenga umshini wokuwasha ekhaya
Drama Theatre (Lipetsk): umlando, repertoire, qembu
Nini futhi kanjani ranta is best athathwe?